सबै ठिक छ । चलचित्र ‘जानी नजानी’ रिलिज हुने समय नजिक आइसक्यो । रिलिज मिति चैत १ गतेलाई तय भएको छ । म अहिले पोष्ट प्रोडक्सनको काममा व्यस्त छु । शुक्रबार फिल्मको ट्रेलर पनि रिलिज भइसकेको छ । त्यसमा धेरै सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । त्यसले निकै उत्साहित बनाएको छ ।
तपाईको त यो डेब्यू चलचित्र तर, यसभन्दा अघि पनि धेरै चलचित्रमा काम गर्नुभयो है ?
निर्देशकको हिसावले यो मेरो पहिलो सिनेमा चाँही हो । तर, म विगत १८ वर्षदेखि चलचित्र क्षेत्रमा नै काम गरिरहेको छु । मैले यो क्षेत्रको काम बाहेक अन्य केही जानेको छैन । म आफैलाई यति नै चलचित्रमा काम गरे भन्ने हेक्का छैन । तर, चलेका केही सिनेमाहरु प्रेमगीत, ड्रिम्स, ए मेरो हजुर–२, दशगजा, भिमदत्त लगायतमा सहायक निर्देशक थिए । त्यस्तै दर्शकहरुले रुचाउनुभएको सर्ट मुभी भुसको लोग्नेमा पनि काम गर्ने मौका पाएको थिए ।
सहायक हुँदा पनि त चलचित्रको निर्देशक बन्ने अफर आयो होला नि ?
आएका थिए । तर म त्यो बेला सिनेमा निर्देशन गर्न मानसिक रुपले तयार थिइन । सिनेमा निर्देशन गरिहाल्नु मेरो लागि ठूलो कुरा थिएन । मलाई अझै धेरै कुरा सिक्नु थियो । सोही कारणले गर्दा म उचित समयको पर्खाइमा थिए ।
डेब्यू निर्देशक हुँदा र सहायक भएर काम गर्दा के फरक हुँदो रहेछ ?
फरक छ नि । हिजोको दिनमा जिम्मेवारी निर्देशकले लिनुहुन्थ्यो । अहिले म निर्देशक भएको छु त्यसैले सफलता–असफलताको जिम्मेवारी मेरो काँधमा आउने छ । निर्देशकलाई सिनेमाको समग्र पक्षको जानकारी हुनुपर्छ । पहिलो फ्रेमदेखि अन्तिम फ्रेम तयार हुँदासम्म टिमसँगको सहकार्यलाई जारी राख्ने काम नै निर्देशकको हुन्छ । सहायक हुँदा त्यो जरुरी थिएन । सो समयमा म पनि कसैबाट निर्देशित भएर काम गर्थेैं ।
खासमा तपाई चलचित्र क्षेत्रमा कसरी लाग्नुभयो ?
म पोखराको निर्मलपोखरीमा जन्मेको हुँ । म सानैदेखि सिनेमा अत्याधिक हेर्ने गर्थें । विद्यालयमा हुने मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन्थें । मेरा सानैमा सिनेमाप्रति झुकाव हुँदा साथीहरुले यो त डाइरेक्टर बन्छ जस्तो छ है भन्थे । १८–१९ वर्षअघि एउटा एनजीओको कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं आएको थिए । सोही समयमा मलाई सिनेमा क्षेत्रमा काम गर्न मन लागेको इच्छा एक जना दाईलाई बताए । उहाँले मलाई सिनेमाको ध्वनीमा काम गर्ने सागर घिमिरेलाई भेटाइदिनुभयो । उहाँलाई मैले निर्देशक बन्ने इच्छा व्यक्त गरे तर, उहाँले ध्वनीसँगै काम अघि बढाउने हो भने सिनेमाको बारेमा धेरै कुरा सिकिन्छ भनेपछि मैले ‘हिरो’ सिनेमामा ध्वनीको काम गरें । छविराज ओझाको व्यानरमा बनेको उक्त फिल्ममा रेखा थापा, पुजना प्रधान लगायतका कलाकारहरुको अभिनय थियो । ध्वनीसँगै मैले मेकअपमा पनि काम गरें ।
तर, निर्देशन विद्यापट्टीको पहिलो सिनेमा ‘संजिवनी’ हो । उक्त सिनेमाको लागि मैले क्ल्याप हान्ने मौका पाएको थिए । मैले प्रदिप श्रेष्ठ, सुदर्शन थापा, दयाराम दाहाल, उज्वल घिमिरे लगायतका निर्देशकहरुसँग काम गरिसकेको छु । मैले दिग्गजहरुबाट सिकेको काम अहिले फलदायी भएको छ । त्यसैले मलाई सेटमा हुने सबै कुराहरु थाहा हुन्छ । मलाई कसैले ठग्न सक्दैनन् ।
पहिलो चलचित्र रिलिज हुँदैछ, ट्रेलरमा पनि राम्रै प्रतिक्रिया छन्, कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ ?
जानी नजानी मेरो पहिलो बच्चा हो । मेरो लागि हरेक दिन चुनौतिपूर्ण छन् । बच्चालाई जस्तो स्याहार सम्हारको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तै गरि मैले सिनेमाको लागि दिनरात नभनी काम गरिरहेको छु । तर, पहिलो सिनेमामा सबैसँग राम्रो समन्वय भएको कारणले गर्दा म उत्साहित छु । मलाई थाहा छ मेरो अथक मेहनतले सिनेमा सफल हुन्छ र म विश्वस्त पनि छु । सिनेमाको ब्यापार कस्तो हुन्छ भन्न सक्दिन तर, सिनेमाको ट्रेलर पनि मन पराइएको छ । त्यसैले व्यापारिक हिसावले पनि राम्रो हुन्छ भन्ने आश गरेको छु । मैले भविष्यका स्टारहरुलाई लिएर सिनेमा बनाएको हुँ तै पनि उनीहरुले गरेको कामको प्रशंसा भएको छ । यसै सिनेमाले मेरो अबको गन्तब्यको निर्धारण गर्ने भएकोले उत्साहितसँगै अत्याधिक डर पनि छ ।
ट्रेलर त हेरियो चलचित्र चाँहि कस्तो बनेको छ ?
म विगत १८ वर्षदेखि यसै सिनेमा क्षेत्रमा छु । जानी नजानीमा मैले चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्दाको अनुभवको व्यापक प्रयोग गरेको छु । त्यसैले जानी नजानी हेर्न ढुक्कले जाँदा हुन्छ । हुनत, कसले पो आफ्नो सिनेमालाई नराम्रो भन्छ र ! तर, मेरो सिनेमामा क्यारेक्टर हावी भएको छ । अरुको सिनेमामा निर्देशक/निर्देशकले जे भन्यो त्यही हुन्छ तर, मेरो सिनेमामा स्कृप्टको डिमान्ड अनुसार क्यारेक्टर जहाँ जानुपर्ने हो त्यही नै गइरहेको छ । निर्देशकले क्यारेक्टरलाई घुमाएको छैन । पात्रलाई गन्तब्यमा पु¥याउने कुरा नेपाली सिनेमामा कमी छ । त्यसमा मैले सुधार गरेको छ ।
चलचित्रमा मुख्य कलाकारहरु मनिष श्रेष्ठ, सन्नी सिंह, नम्रता तथा डेब्यू गर्ल निरिशालाई लिनुको कारण के ?
चलचित्रमा देभको भूमिका मनिषले निभाएका छन् । यो भूमिका समग्र नेपाली कलाकारमध्ये ३–४ जनालाई मात्रै फिट हुन्थ्यो । मनिषसँग मैले पहिलै पनि काम गरेको हुँ । उनको सबै क्यारेक्टरसँग फिट हुने भएको कारणले गर्दा मनिष रोजिएको हो । सन्नीले चिरागको भूमिका निभाएका छन् । मलाई अलि स्वार्थीपन देखाउनसक्ने कलाकार चाहिएको थियो । सोही कुरा उनमा पाएपछि उनी मेरो रोजाइमा प¥यो । नम्रता वर्षाको भूमिकामा छिन् । वर्षाको स्वभाव अलि कडा छ । उसमा त्यही कुरा देखेर उनी पनि रोजाइमा परिन् ।
साँच्चै भन्नुपर्दा निरिशाको भूमिकाको लागि मैले केही हिरोइनहरुसँग कुरा गरेको हुँ । तर, उहाँहरु क्यारेक्टरमा सिरियस नभएको पाँए । सुरुमै मेकअपको कुरा, कस्ट्युमको कुरा गरेको मलाई मन परेन । त्यो उहाँहरुले सोच्ने कुरा पनि होइन अनि मलाई लाग्यो चलेका भनेका कलाकारहरुले सहि भूमिका निभाउन सक्दैनन् । डेब्यू नायिकाको खोजी पो गर्ने हो कि जस्तो लाग्यो । त्यसपछि केहीसँग कुरा भयो तर, फिट हुने जस्तो लागेन । खोजीकै क्रममा निरिशासँग भेट भयो । लुक्समा त उनी फिट देखियो तर, अभिनय, डाइलग तथा क्यामरेको अडिसन पार परेपछि उनी चलचित्रको लागि रोजिएकी हुन् । यी साथै अन्य कलाकारहरुलाई पनि लिएर हामीले १ महिना लामो वर्कसप ग¥यौं । वर्कसपमा क्यारेक्टरहरु तयार भएपछि हामी फ्लोरमा गएका हौं ।
केही कलाकारहरु निर्देशकले भनेको मान्दैनन् भन्ने सुनिन्छ, यी कलाकारहरुसँग काम गर्दा सजिलो/गाह्रो के भयो ?
मेरो टिमवर्क राम्रो थियो । कलाकारहरुलाई मैले बच्चाजस्तै माया गर्थें । तर, सुझाव सल्लाह चाहिएको समयमा त्यो पनि दिन्थें । उनीहरुले मलाई नटेर्ने भन्ने कुरै थिएन । उनीहरु म सँग काम गर्नको लागि सहज मान्थे । मैले पनि त्यो सहज वातावरण निर्माण गरिदिन्थें । रमाइलो गर्दा गर्दै काम हुन्थ्यो । त्यसैले मैले भनेको नटेर्ने भन्ने थिएन ।
सिनेमाको गीत ‘एउटीलाई मुटुमा घर’ले त चर्चा कमायो नि है ? यसबाट कति उत्साहित हुनुहुन्छ ?
नेपाली सिनेमाको बजारीकरणको लागि गीतको ठूलो भूमिका देखिएको छ । स्टोरीसँगै सिनेमाको गीत पनि महत्वपूर्ण भएको छ । गीत हिट भएपछि दर्शक हलसम्म पुग्ने पनि देखिएको छ । ‘एउटीलाई मुटुमा घर’ले पनि सिनेमालाई एउटा उचाइमा पु¥याएको छ । तर, हामीले यो गीत पब्लिसिटीको लागि राखिएको भने होइन । यो गीत स्कृप्टको माग हो । यति हो दर्शकलाई गीत फेक लाग्दैन ।
विदेशमा रहेका नेपाली दर्शकले पनि चलचित्र हेर्न पाउँछन् ?
पाउँछन् । ढिलो चाँडोको कुरा हो । हामीले भर्खरै ट्रेलर रिलिज गरेका छौं । बिभिन्न देशको लागि कुराकानी अघि बढेको छ । मेरो सोच पनि धेरैभन्दा धेरै दर्शकले हेर्न पाउन् भन्ने छ । त्यसैको लागि काम भइरहेको छ ।
तपाई निर्देशक भएको हिसावले चलचित्र ‘जानी नजानी’ हेरेर दर्शकले के पाओस् भन्ने आशा गर्नुभएको छ ?
मैले यो सिनेमा बनाउन मैले केही वर्ष खर्चेको छु । निकै मेहनत गरेर एउटा सेपमा आएको छ । सिनेमाले प्रेमकथासँगै सामाजिक सन्देश पनि दिएको छ । सिनेमा हेरेपछि दर्शकले पैसा असुलेको महशुस गर्दै केही सिकेर जाओस् भन्ने मेरो चाहना छ ।
चलचित्र क्षेत्रको समस्याको बारेमा कुरा गरौं है, तपाईलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्र कतातिर गइरहेको छ जस्तो लाग्छ ?
एकातिर हरेक दिन नेपाली चलचित्रमा नयाँ शैली प्रयोग भइरहेको छ । त्यो असल कुरा हो तर, सिनेमाहरु एक पछि अर्को फ्लप भइरहेका छन् । सायद हामीले दर्शकको चाहना अनुसार सिनेमा बनाएका छैनौं कि ! राम्रो सिनेमा बन्दाबन्दै पनि हलसम्म दर्शक ल्याउन पो सकेनौं कि ! हरेक सिनेमाको लागि टिमले निकै मेहनत गरेको पाएको छु । नयाँ प्रयोग पनि भइरहेको छ । तर, व्यापारिक रुपले चुकेका छौं । राम्रो नियतले सिनेमा लगानी गर्ने हो भने पैसा डुब्ने भन्ने कुरै छैन ।
चलचित्रको बजार साँघुरो भयो भनिरहेको बेला किन नेपाली चलचित्रहरु एक आपसमा भिड्छन् ?
हामीमा अरुलाई खोट लगाएर आफू उम्कने संस्कार छ । यतिको साँघुरो बजारमा वर्षमा सयौं सिनेमा बन्छन् तिनै सिनेमा एक आपसमा भिड्ने हुन् । यसमा कसैले रोकतोक लगाउन सकेको छैन । चलचित्र बनेसी सबैले चाँडै रिलिज होस् भन्ने चाहना राख्छन् । यहाँ यसबारे कुनै नियम बनेको भए यस्तो अवस्था नआउन सक्थ्यो ।
नेपाली चलचित्र हेर्न दर्शकहरु हलसम्म पुग्न छोड्नुको कारण युट्युबमा नै ढिलोचाँडो चलचित्र आउँछ भनेर हो रे नि त !
हिन्दी सिनेमा त चलचित्र रिलिज हुने बित्तिकै इन्टरनेटमा भेटिन्छन् । तै पनि हिन्दी सिनेमाको दर्शक घटेको पाइँदैन । नेपाली सिनेमा त चलचित्र रिलिज भएको लामो समयपछि युट्युबमा हाल्ने गरिएको छ । केही नेपाली सिनेमाहरु हेर्नको लागि हलमा दर्शकको घुइचो नै लाग्यो । पछि युट्युबमा पनि हिट भयो । राम्रो चलचित्र बनायो भने हलमै दर्शक पुग्छन् । युट्युबमा हाल्छन् र हेर्छु भन्नेहरु विरलै भेटिएलान् । म त भन्छु पहिला राम्रो सिनेमा बनाऔं न दर्शक त आइहाल्छन् । सफल भएका सिनेमाको उदाहरण हामीसँगै छन् ।
नेपाली सिनेमा निर्माताहरुको किन आलोचना भइरहेको होला ?
केही निर्माताहरुले हचुवाको भरमा पैसा खन्याइरहेको पाएको छु । उनीहरुलाई सिनेमाको ज्ञान जरुरी छ । कस्तो निर्देशकलाई छान्दैछु भन्ने कुरा पनि थाहा नहुनेले किन सिनेमा बनाउने आँट गर्नु ! कति सिनेमाहरु फ्लोरमा गएर त्यसै अलपत्र बनेका छन् । कम्परमाइज गरेर सिनेमा बनाएर फ्लप भएका उदाहरण त कति छन् कति । ५ लाख गोजीमा बोके पनि प्रोड्युसर ५० लाख हुनेहरु पनि प्रोड्युसर । तयारी बिना किन पैसा डुबाइरहेका होलान् ? कम्तिमा टेन्टेटिभ बजेट निकालेर सिनेमा बनायो भने त राम्रो सिनेमा बन्छन् नि । तपाईलाई थाहा छ, केही नेपाली सिनेमामा सुरुमै क्लाइमेक्स र फाइट सिन खिचिन्छ ! किनकी त्यसमा खर्च बढी हुन्छ । अनी बाँकी सिन आलटाल गरेर राख्ने गरेको पाइएको छ । निर्देशकको मिठो गफमा किन फस्नुहुन्छ त्यो चाँही उहाँलाई नै सोध्नुहोला ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा क्यामराको लेन्स नै नचिन्ने पनि निर्देशक भएका छन् भनेर एक चल्तीका कलाकारले भने के अवस्था यस्तै हो त ?
यो कुरा कसले किन भन्यो मलाई थाहा छैन । तर, निर्देशकले राम्रो टिमको चयन चाँही गर्नुपर्छ । उसलाई लेन्सको बारेमा जानकारी हुनु नहुनुसँग मतलव छैन । लेन्सको ज्ञाता क्यामेराम्यान हो । तर, पनि सिनेमा निर्देशन गर्छु भन्नेलाई सामान्य ज्ञान छैन भने त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन । लेन्सको बारेमा कुरा उठाउनेले आफ्नै बेइजत गर्नुभएछ । (हाँस्तै) कम्तीमा उहाँले निर्देशकलाई चिन्नुपथ्र्यों नि !
यो भन्दा बाहेक पनि त समस्याहरु छन् होला नि ?
चलचित्र क्षेत्रमा समस्या त कति हो कति । चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्रहरुलाई नीति नियम बनाएर दायरामा ल्याउनु प¥यो क्या । चलचित्रको सेन्सर पास भएपछि मात्रै रिलिज मिति घोषणा गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा सिनेमालाई क्षेत्र भनिन्छ । खोइ उद्योगको रुपमा अघि बढ्न सकेको । सिनेमाको लागि ऋण माग्न गयो बैंकले पत्याउँदैन । पारिश्रमिक नपाउने कलाकार तथा अन्यको ग्यारेन्टी कसले लिने ? खोइ बक्स अफिस ? खोइ निर्माता र हलवालाहरुबीचको समन्वय ? यी लगायत भित्री कुराहरु पनि धेरै छन् ।
अन्तमा, जानी नजानी हेर्नको लागि दर्शक किन हलसम्म पुग्ने ?
जानी नजानी चलचित्र चैत १ गते रिलिज हुँदैछ । यो मेरो पहिलो सिनेमा हो । हिजोको दिनमा अरुको सिनेमालाई त धेरै मेहनत गरेको थिए । आफ्नै सिनेमाको लागि त झनै कति काम गरेको छु होला । दर्शक हलमा आएपछि निराश पर्नुहुन्न । पोष्टर, गीत तथा ट्रेलरहरु रुचाइएका छन् । स्तरिय सिनेमा बनेको छ । चलचित्र हेरेपछि दर्शकहरुले मनोरञ्जनसँगै केही कुरा पक्कै जानेर आउनुहुनेछ ।